Manganese Sulfate MnSO4 Factory Price - Soundless Cracked အေးဂျင့် | တိုးချဲ့မော်တာ | အသံတိတ်ရော့ခ်ပေါက်ကွဲမှု | တိုးချဲ့ဘိလပ်မြေ | ဖြိုဖျက်အေးဂျင့် | non-ပေါက်ကွဲဖြိုဖျက်အေးဂျင့်
ပုံမှန် Soundless Cracked အေးဂျင့်
အမြင့် Range Soundless Cracked အေးဂျင့်
နေအိမ် » ကုန်ပစ္စည်း » Manganese Sulfate MnSO4 Factory Price
ကျောက်ဖြတ်တောက်ခြင်း Disk ကိုစိန်အစိတ်အပိုင်း
RIBO5စို့မြင်းများနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင် 30mm-80mm တူးဖော်ခြင်း-bits
32မီလီမီတာစက်ရုံစျေးနှုန်းလက်ဝါးကပ်တိုင် Bits / လက်ဝါးကပ်တိုင်လေ့ကျင့်ခန်း Bit / လက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုဘှားမွငျလေ့ကျင့်ခန်း Bits RIBO 5
tungsten carbide ခုနစ်ခုအံသွားလေ့ကျင့်ခန်းနည်းနည်း 34mm
28မီလီမီတာဆွန်းအဖြိုက်နက် carbide လေ့ကျင့်ခန်း-bits RIBO-02
ထုတ်ကုန်အမည်:40မီလီမီတာ Tungsten carbide လက်ဝါးကပ်တိုင်ဆောက်လုပ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းကိုက်, ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်း-bits RIBO-01 ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
တိုးချဲ့မော်တာ / အမှုန့် / ဖြိုဖျက်အကျိုးဆောင်ကွဲအက်
Soundless က Non-ပေါက်ကွဲ Cracked အေးဂျင့်
ထိုသို့ကျောက်အမြင့် Range ကျောက်ခေတ် Cracked အေးဂျင့်
Manganese Sulfate MnSO4 Factory Price
Manganese sulfate isatrace element needed for the synthesis of fatty acid crops, so manganese sulfate can be used as fertilizer to enter the soil and increase production. Manganese sulfate is added to animal feed, which has the effect of fattening. Manganese sulfate is also the raw material and analytical reagent for preparing other manganese salts. Manganese sulfate is also used in industrial production of electrolytic manganese, dyestuff, paper and
Classification အမျိုးအစား CAS No အခြားအမည်များ MF မူလနေရာ Grade Standard Purity Appearance
Sulfate Manganese Sulfate 7785-87-7 manganese sulfate MnSO4 HeZhou, တရုတ် Agriculture Grade, Food Grade, Industrial Grade 98% Min light pink
လျှောက်လွှာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် မော်ဒယ်နံပါတ် Grade Supply နိုင်ခြင်း ထုပ်ပိုး & ပို့ခြင်း Normally 25kg/woven bag with PE lining ဆိပ်ကမ်း ကြာမြင့်ချိန် :
Industrial grade, food grade, feed grade RIBO 2018-4-26 Industrial Grade 3200 Metric Ton/Metric Tons per Month ထုပ်ပိုးအသေးစိတ် Custom packing bag or label as customer’s request Guangzhou (huang pu /nansha) အရှေ့. အချိန်(ရက်ပေါင်း)7ညှိနှိုင်းခံရဖို့
Chemical Name: Manganese sulfate
Molecular Weight: 169.02
Grade: Food, industrial, feed grade
It isapale pink, granular powder. It is freely soluble in water, but is insoluble in alcohol. Odorless, the relative density is 2.95. It starts loss crystal water when heated higher than 200℃, loss all crystal water when 280℃, and can be salt melt anhydrous when 700℃; Decomposing when 800℃ and will have insoluble back residue called Mn3O4, totally decompose in 1150℃
MnSO4·H2O ≥98% Pb ≤5ppm
Mn ≥31.8% As ≤3ppm
Cd ≤10ppm Hg ≤0.2ppm
ထုပ်ပိုး: 25kg/woven bag with PE lining
Storage & Transportation: Stored inadry and ventilating warehouse. Keeping away from moisture and hot; unloaded with care. Stored separately from poisonous substances.
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်. မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များများအတွက် သို့မဟုတ် pricelist, အကြှနျုပျတို့အားစွန့်ခွာကျေးဇူးပြုပြီး ကျနော်တို့အတွင်းထိတွေ့ပါလိမ့်မည် 24 နာရီ.
Pinggui စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ, Hezhou စီးတီး, ကွမ်းရှီးတရုတ်
မူပိုင် ©2021 RIBO စက်မှုလုပ်ငန်း CO ။ , LTD မှ. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး.